Waseda University - Fianarana in Japana. EducationBro Magazine
fanafohezan-teny : Wu
Créé : 1882
mpianatra (eo ho eo.) : 55000
Aza adino ny miresaka momba Waseda University
Misoratra anarana ao amin'ny Waseda University
Waseda University manana fitsipika ho toy ny mpanorina ny fiarovana ny fahaleovan-tena ny vatsim, ny fampiroboroboana ny fampiharana ny vatsim-pianarana, ary ny hanampy amin'ny olom-pirenena ny tsara.
Mitandrina tsara ny fahaleovan-tena ny vatsim ho toy ny foibe fitsipika, Waseda University hifaninana handray anjara ny vatsim-pianarana ny izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fikarohana momba ny fahalalahana tahaka ny tena ilaina sy nanokana ny tenany mandrakariva ny tany am-boalohany fikarohana.
Mitandrina tsara ny fampiharana ny vatsim-pianarana ho toy ny foibe fitsipika, Waseda University hifaninana handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fotoana amin'ny alalan'ny fametrahana ny lalana ho an'ny fampiasana ny azo ampiharina ny manam-pahaizana ary koa ny fikarohana ara-mitady ho azy tenany ihany.
Mitandrina tsara ny hanampy amin'ny olom-pirenena ny tsara toy ny foibe fitsipika, Waseda University hifaninana mba hamboly ny olona ny toetra amam-panahy izay afaka manaja ny maha, mampivelatra ny tenany sy ny fianakaviany, hahasoa ny firenena sy ny fiaraha-monina, ary ho mavitrika eto amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny.
Ny fanovana ny tontolo manerantany sy borderless mihamaro foana isan-taona, mikasika sehatry ny fiaraha-monina rehetra, sy ny anjerimanontolo dia tsy afa. Labels toy ny an-trano sy any ivelany intsony ny dikany, toy ny anjerimanontolo manerana an'izao tontolo izao hiatrika fifaninanana miha masiaka eo amin'ny fikatsahana amin'ny avo indrindra-tsara fampianarana sy ny fikarohana.
Koa satria ny fototra, Waseda University no mora mahatsapa ny fiovana eo amin'ny fiaraha-monina raha foana ny fitsipika fototry. Efa tsy natahotra naka tamin'ny isan-karazany ny zava-tsarotra, ary sasatry ny nanenjika zava-baovao. Waseda efa naorin'i ny maro alohany sy ny ezaka feno fahasahiana embodying ny mpanorina fanahy. Na izany aza, rehefa miatrika vanim-potoana izany ny fiovana goavana, I mahita izany ho toy ny iraka sy adidy ny ankehitriny Waseda mba handeha bebe kokoa momba izany fomban-drazana trano.
Ny fahitana dia ny hitarika ao amin'ny Global fanabeazana sy ny fikarohana. Ny teny filamatra Fampianarana Tsara Indrindra, Best Research, Best Community, maneho ny tanjona iombonana hanatratra izao tontolo izao-kilasy vokatra amin'ny rehetra ny fikatsahana. Mino aho fa izao no fotoana mba mibosesika handroso amin'ny Waseda ny nentin-drazana ary marisika fanahy mba hiatrehana ireo fanamby maro izao tontolo izao ankehitriny Miatrika.
Mazava ho azy, nitondra tao amin'ny Global zava-tsarotra dia mitaky fanomanana tsara, ary tsy maintsy manorina ny reraka eo anoloan'ny manao dingana lehibe.
Waseda mpanorina Shigenobu Okuma hahalala izao, nanao hoe: "Raha te-hanidina avo, tokony handinika lalina,"Ary nahatsapa mivantana izany tany am-piandohan 'ny teny voalohany ho filoha. Efa-taona farany no TENA momba ny fianarana ao amin'ny fiomanana mba manidina. Ny dingana voalohany ahitana tanjona telo lehibe:
1. Mamolavola mazava fahitana sy drafitra lehibe ho an'ny dingana
2. Manaova ny rafitra maty paika mifototra amin'ny Global fitsipika
3. Hanatanjahana ny ara-bola fototry ilaina ny mifaninana amin'ny hafa izao tontolo izao-kilasy andrim-panjakana
Ny rafitra ho an'ny fandaharana io dia ny Waseda Vision 150 stratejika drafitra, izay mametraka ny tanjona sy ny hetsika ho amin'ny fe-potoana hatramin'ny 150th Waseda ny tsingerin-taona amin'ny 2032. Ao amin'ny tontolon'ny fampianarana, izay efa rafitra fampiharana ny Quarter sy nanorina ny Global Education Center sy ny Foibe ho an'ny Fampianarana Ambony Fianarana; ao amin'ny tontolon'ny fikarohana efa nanorina ny Ura (University Research Administrator) toerana tao amin'ny Center for Research Strategy; in bola, no mandrisika ambony sehatra ny fanomezana ara-bola ka afaka salama kokoa vokatra ankapobeny.
Ireo ezaka efa ekena sy Nampiroborobo ny Waseda ny fifantenana ho toy ny kilasy ambony andrim-panjakana ao amin'ny firenena fandaharana Super Global University. Eo anivon'ny iraisam-pirenena fironana ny fanokafana ny oniversite ho an'izao tontolo izao sy ny nanantitrantitra mavitrika fisainana, manome ny fandaharana atolotry sy ny fanohanana ny tanjona hamaky eo an-tampon'ny 100 izao tontolo izao oniversite filaharana sy mamokatra 100,000 mpitarika maneran mihoatra ny folo taona.
Ny oniversite iray manontolo niara-niasa toy ny ekipa mba hahazoana ireo vokatra ao amin'ny dingana voalohany ny fikasana. ankehitriny, mijery mialoha, Izaho kosa efa nanendry ny politika ho an'ny dingana manaraka roa, mikendry for Waseda, ny tsara indrindra.
Nanenjika fanavaozana avy amin'ny mpianatra ny fomba fijerin'ny
Ny tena mpandray anjara ny oniversite dia ny mpianatra, ary ny lanjan'izy ireo dia hotsaraina araka ny hatsaran'ny ny mpianatra dia mamboly ary mandefa ho any amin'izao tontolo izao. Nandritra ireo efa-taona farany, dia nihaino ny mpianatra, ary tapa-kevitra ny filàna ny mampianatra ny olona ny ho avy loharanon-karena ho an'ny taona. Izahay nitondra fanaintainana hampiharana fanavaozana avy amin'ny mpianatra ny fomba fijerin'ny, anisan'izany ny fampandrosoana ny toerana IARAHA-MIDINIKA-monina ary ny fanalàna olana kilasy, ny fanitarana ny fianarana any ivelany toy ny fifanakalozana fahafahana fandaharana sy ny fiofanana, ary ny overhaul ny vatsim rafitra. Ny mpianatra sy nahazo diplaoma, anisan'izany ny mpianatra iraisam-pirenena, dia ny metatra izay no mandrefy ny zava-bita "ny tsara indrindra,"Ary toy izany koa ny dingana lehibe isika amin'ny andro ho avy manao taona dia ho entin'ny tetikasa ho an'ny mpianatra.
Ny fandikana amin'ny fivoriambe, nitondra ny zava-tsarotra vaovao
Ny toe-tsaina tsikelikely sahanin'ny Waseda tsy midika hoe fandaminana ny toe-quo, fa mandeha ho lehibe kokoa mihoatra fivoriambe avo. Izany toe-tsaina no ho lehibe indrindra tosika ho fanatrarana izao tontolo izao-kilasy Waseda izay sary an-tsaina.
Sekoly tsirairay sy ny fikambanana fikarohana efa lasa valin-baovao ho amin'ny fironana ny fanatontoloana sy ny interdisciplinary fianarana. Ny sampam-pianarana sy ny mpiasa ihany koa no namoaka hevitra revolisionera fikarohana, fangadiana fampianarana afa-po sy ny fomba fiasa, ary ny hevi-baovao ho an'ny rafitra fitantanana. Ny finiavana sy ny hafanam-po ho an'ny misimisy olana dia zava-dehibe amin'ny fanatrarana ny tanjona amin'ny "Waseda, ny tsara indrindra. "Isika rehetra dia tsy maintsy hamorona fahafahana sy miara-miasa mba hahatratra ny tanjona mandritra ny dingana faharoa.
Anjara amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny Waseda ny fikarohana, ny kolontsaina sy ny fanahy
In 1913, toy ny ampahany amin'ny ny iraka nanambara ny Shigenobu Okuma, Waseda University nanao ny "fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny fahalalana ... ka manitatra ny hery mitarika sy ny asa atao ho an'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny." Zato taona tatỳ aoriana, amin'izao fotoana izao dia mitaky ny taona vaovao ho an'izao tontolo izao fanambarana. Rehefa hiatrehana ny zava-tsarotra ho avy, dia tsy maintsy manolo-tena indray ho tonga saina ny University iraka tany am-boalohany.
Soa ihany, Waseda University no tohanan'ny mpampianatra manan-talenta maro, Alumni sy ny mpianatra. Isika koa fitahiana amin'ny lova sy ny fomban-drazana hatramin'ny ambolena 1882. Ny dingana faharoa, dia nalaza noho nitandro hasasarana mba hanitatra ny hery Waseda, mba hitarika izao tontolo izao amin'ny zava-baovao, miaraka amin'ny fiara tapa-kevitra handray anjara amin'ny 'izao tontolo izao.
Taorian'ny ny tondrozotra ny Vision 150 drafitra, amin'ny sampam-pianarana, Alumni sy mpianatra miasa ao amin'ny fiaraha-miasa akaiky mankany Waseda, ny tsara indrindra, Fantatro fa ho lasa amin'ny oniversite izay azontsika rehetra mandray bebe kokoa ny avonavona ao amin'ny.
Filoha Kaoru Kamata
Sekolin'ny siansa politika sy ny Toekarena
Sekolin'ny Kolontsaina, Media sy Society
Sekolin'ny Humanities sy ny Siansa Sosialy
Sekoly fototra siansa sy ny injeniera
Sekolin'ny Creative Science sy Engineering
Sekolin'ny Advanced Science sy Engineering
Sekoly Siansa Sosialy
Sekoly ny Human Sciences
Sekolin'ny Sports Sciences
Sekolin'ny International Liberal Fianarana
Graduate School ny siansa politika
Graduate School ny Taratasy, Zavakanto sy ny Siansa
Graduate School fototra siansa sy ny injeniera
Graduate School of Creative Science sy Engineering
Graduate School of Advanced Science sy Engineering
Graduate School of Azia-Pasifika Fianarana
Graduate School of Global Information sy Telecommunication Fianarana
Graduate School Japoney Applied Linguistics
Graduate School ny Fampahalalam-baovao, Production sy ny Systems
Graduate School ny Sports Sciences
Ny Okuma School Filazam-Management
Graduate School of Finance, Accounting sy ny Lalàna
Graduate School ny Tontolo Iainana sy ny Angovo Engineering
Graduate School ny Fanaovan-gazety
Ny oniversite dia naorin'i samouraï manam-pahaizana sy ny vanim-potoana Meiji-mpanao politika sy ny praiminisitra teo aloha Ōkuma Shigenobu in 1882, ary naka ny anaram-boninahitra oniversite ao 1902. Nanomboka ho toy ny oniversite amin'ny departemanta telo Japoney eo ambany taloha tontolo fianarana ambony.
In 1882, ny oniversite nanana ny sampan-draharaha ara-politika sy ny toekarena siansa, lalàna, sy ara-batana siansa. Miaraka amin'ireo departemanta, Mazava ho azy fa ny teny anglisy dia naorina, izay ny mpianatra rehetra ny departemanta afaka hianatra teny anglisy.
Telo taona taty aoriana, ny sampan-draharaha ny ara-batana no nakatona siansa satria tsy vitsy loatra mpiadina. Ny sampan-draharaha ny siansa sy ny injeniera dia naorina teo an 1908.
Ny sampan-draharaha ny boky sy gazety dia naorina teo an 1890.
Na dia fomba ofisialy Waseda nanaraka ny teny hoe oniversite amin'ny anaram-boninahitra ao amin'ny 1902 dia tsy mandra- 1920 fa, mitovy amin'ny hafa Japoney sekoly sy kolejy, dia nahazo fankatoavana ofisialy ny governemanta ho toy ny oniversite ambanin'ny teny ao amin'ny University Fametrahana hanaovana Ôrdônansy.
Ny sampan-draharaha ny fanabeazana dia naorina teo an 1903, ary ny sampan-draharaha ny varotra, in 1904.
Maro amin'ireo oniversite rava tao amin'ny afo baomba an'i Tokyo nandritra ny Ady Lehibe II, fa ny oniversite dia indray ary nisokatra ny 1949. Ary dia nitombo ny lasa feno anjerimanontolo roa ambony sekoly ambony sy ny sekoly ny zavakanto sy ny maritrano.
Tamin'ny Jona 12, 1950, Enim-polo polisy bemidina Waseda University ary nosamboriny dika mitovy ny kominista-ara-tsindrimandry taratasy misokatra ho General MacArthur. Ny taratasy misokatra ho MacArthur dia iray hamaky amin'ny kominista-tohanan'ny famoriam-bahoaka isan-kerinandro aloha. Ny taratasy Nitaky ny fifanekem-pihavanana ho an'ny Japana izay ahitana Rosia sy Shina Kaominista, fanesorana ny fibodoana hery, ary ny famotsorana ny 8 Zavatra tsy nalefa tany am-ponja noho ny hiady 5 U.S miaramila amin'ny kominista famoriam-bahoaka. Nisy polisy nanao hoe: manam-pahefana ao amin'ny Waseda ny ankamaroan'ny fivoriana ho voarara amin'ny ho avy, satria “singa ara-politika” Mety hiezaka ny hampiasa azy ireo. Yuichi Eshima, Vice-Filohan'ny fizakan ny Mpianatra Society, hoy ny polisy “stupified” mpianatra sy ny mpampianatra, ary izay “Izany no ratsy noho ny prewar fepetra fiarovana ny fiadanana.”
Ianao ve mila miresaka momba Waseda University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Waseda University ao amin'ny Map
Photos: Waseda University ofisialy Facebook
Waseda University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Waseda University.
Osaka University tariny